Otu iwu Dutch Multidisciplinary siri ike dị na Eindhoven na Amsterdam
gbasara Anyị » Otu iwu Dutch Multidisciplinary Iwu
AKENKỌ gbasara nchekwa data (GDPR)
Otu iwu Dutch Multidisciplinary Iwu
Law & More is a dynamic multidisciplinary Dutch law firm and tax advisory specializing in Dutch corporate, commercial and tax law and is based in Eindhoven na Amsterdam.
With its corporate and tax background, Law & More na-ejikọ ịmama nke nnukwu ụlọ ọrụ na ndụmọdụ ndụmọdụ ụtụ isi ya na itinye uche na nkọwapụta na ọrụ ahaziri iche ị ga-atụ anya maka ụlọ ọrụ boutique. Anyị bụ ndị mba ụwa n'ezie n'ihe niile gbasara ọrụ anyị, anyị na-arụkwa ọrụ maka ọtụtụ ndị ahịa Dutch na ndị mba ofesi, site na ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na ndị mmadụ.
Law & More N'aka nke ya, ndi okacha mara otutu asusu na ndi okacha amara nke nwere asusu di omimi banyere iwu nkwekorita Dutch, iwu ulo oru Dutch, iwu ukpe Dutch, iwu oru ndi Dutch na iwu akụrụngwa nke obodo. Firmlọ ọrụ ahụ amakarịkwara n'ịhazi ụtụ ụtụ nke akụ na ọrụ, iwu ike Dutch, iwu ego Dutch na azụmahịa ụlọ.
Ma ị bụ ụlọ ọrụ dị iche iche, SME, azụmahịa na-apụta ma ọ bụ nkeonwe, ị ga-ahụ na ụzọ anyị si agbanwe bụ otu: mkpebi niile ịchọrọ ị nweta ma na-aza mkpa gị, oge niile. Anyị na-enye karịa ọmarịcha ọrụ iwu dị oke mma - anyị na-ebunye ọsịsa, ọnụọgụ abụọ nke azịza ya na ọrụ na ụzọ dị nso.
N'elu nke a, ụlọ ọrụ ahụ nwere ọrụ aka n'ịhazi usoro mkparịta ụka na usoro mgbazi na Netherlands. Nke ikpe azu, anyi n’enye ndi ahia anyi aka nkuzi banyere ulo oru haziri nke oma maka ndi n’aru ndi oru ha, n’otu okwu iwu di iche, nke di nkpa banyere ulo oru a.
A na-anabata gị ileba anya na weebụsaịtị anyị, ebe ị ga - achọta ozi ndị ọzọ gbasara Law & More. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịkọ banyere otu iwu dịịrị ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ọrụ anyị, biko egbula oge ịkpọtụrụ.
Firmlọ ọrụ anyị bụ onye otu netwọkụ LCS nke ndị ọka iwu dabere na Amsterdam, The Hague, Brussels na Valencia.
E. [Email na-echebe]lawandmore.nl